Mashandisiro ekushandisa iyo iOS 13 Memoji Stickers mune chero app | IPhone nhau
Mashandisiro ekushandisa iOS 13 Memoji Stickers
Nguva yeiyo iOS 13 kuvhurwa iri kuswedera uye isu tinofanirwa kuve takagadzirira izvo zviri kuuya kwatiri. Pane shanduko dzakawanda dzatinowana mune nyowani Apple inoshanda sisitimu asi nhasi tiri kuenda kuzoona tingaishandisa sei Memoji Stickers muMamessage, masocial network senge Facebook, Twitter kana kunyangwe WhatsApp.
Zviri pachena Vaya vane beta vhezheni dzeIOS 13 dzakaiswa zvino vanogona kushandisa aya Memoji Stickers, asi isu vedu vasina betas vari kuzogamuchira ruzivo rwacho kamwechete uye nekuda kwechikonzero ichocho zvinogona kubatsira kuzorodza ndangariro yekushanda kwayo nemhando iyi yezvidzidzo zviri nyore.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti ichi chaive chimwe chezvakanyanya kutaurwa nezve zviitiko muhurukuro yekupedzisira yaJune pakaitwa WWDC yegore rino. MuIOS 13 uye iPadOS tinogona kushandisa yedu yeMemoji Sticker, zvigadzirise uye wobva wangozvigovana mune akasiyana maapplication kupfuura Apple Messages. Kune izvi isu tinofanirwa kutevedzera mashoma mashoma matanho atinokuudza izvozvi.
Chinhu chekutanga kuvhura iyo Messages app uye tinya pa "emoji" kubva pasi kuruboshwe:
Iye zvino tinofanirwa kugadzira kana kutsvaga yedu Memoji nekutevera nhanho nekudzvanya pa "+". Kana tangogadzirwa, isu tinokwanisa kutanga kunakidzwa neaya Memoji Stickers kubva ku icon inowoneka kana uchidzvanya pane App Store chiratidzo kana tiri muMessage app, ingori yepakati icon mumufananidzo pazasi:
Kana isu tikadzvanya pane iyo iOS 13 keyboard kekutanga isu tichaona chiziviso nezve aya matsva Memoji Stickers, saka dzinogona kushandiswa chero nguva.
Aya maMemoji Stickers matsva achave aripo pamwe chete nema emojis atinotova nawo uye kuashandisa mumapurogiramu tichafanirwa kudzvanya pachiso chemoji uye kutsvedza kurudyi kuti zvionekwe. Izvo zviri nyore uye zvinogona kushandiswa mune chero app nakidzwa neaya matsva Memoji Stickers.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Mashandisiro ekushandisa iOS 13 Memoji Stickers
Sleeve yegoridhe Apple Kadhi yemamirionea
Ko kana iyo iPhone 11 Pro kamera isina kunamira?